မိဘရှာပေးတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » မိဘရှာပေးတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်
Posted by သကြားလုံးကြော် on Jan 4, 2013 in Cultures, Editor's Choice | 45 comments
ဒီခေတ်ကြီးမှာ မိဘစပ်ပေးလို့ယူရတာ အတော်နည်းနေပါပြီ။ မိဘတွေကလည်း ကိုယ်ရှာပေးလိုက်တဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်က မကောင်းရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ယူကြုံးမရဖြစ်မှာ စိုးလို့ မရှာပေးချင်ကြတော့ပါဘူး။ အချိန်တန်အရွယ်ရောက်တဲ့ လူငယ်တွေကြိုက်တာရွေးထားတာ သင့်တော်တယ်ဆိုရင် ရုပ်ရှင်ထဲကလို အတင်းဆွဲမခွဲတော့ဘူး။ အလုပ်ထွက်လုပ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ များလာတဲ့ ဒီခေတ်မှာ လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်း အိမ်မှာထိုင်ပြီးမိဘရှာပေးမှာစောင့်မနေစရာမလိုဘဲ သူ့ဘာသာ အလုပ်မှာကျောင်းမှာ ချိတ်မိစပ်မိနဲ့ ရှာတွေ့သွားကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မိဘပေးစားလို့ယူရတယ်ဆိုတာ ကျမအဖေအမေတို့ခေတ်ကနဲ့စာရင် အတော်နည်းလာပါပြီ။ ခက်တာက ကိုယ်တိုင်မရှာ ချင်တဲ့ လူငယ်တွေကျမှပဲ မိဘက မီးထိုးရတော့တယ်။ ကျောင်းမှာတုန်းကလည်းမရှာ၊ အလုပ်မှာလည်းမရှာ၊ မတွေ့ရင်လည်းမယူ၊ မိဘရှာပေးရင်တော့ ယူမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ကိုယ်တိုင်ရှာရတဲ့ risk ကလည်းနည်းတာမှမဟုတ်တာ။ ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက် ကောင်းတယ်ထင်လို့ရွေးလိုက်ပြီးမှ မကောင်းရင် မိဘကို အပြစ်တင်လို့လည်းမရ၊ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်မို့ ကြိတ်ခံရမှာ။ ဒီလိုနဲ့ မိဘတွေခေါင်းပေါ် တာဝန်ပြန်ရောက်လာရော။
ကျမညီမ၀မ်းကွဲက ရန်ကုန်ကအောင်တဲ့ ဆရာဝန်ပေါက်စ။ မြန်မာပြည်မှာ ဆရာဝန်တွေ အရင်ကရော အခုရော ဈေးအရမ်းကောင်းပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ဆရာဝန်မရှိသူတွေက ဆရာဝန် ချွေးမဆို လိုချင်ကြတယ်။ တကယ် ဆေးကုကု မကုကု၊ အသက်ကြီးလာတဲ့ မိဘတွေကို တချိန်လုံး မနီးကပ် ကြည့်ရှုတိုင်ပင်နိုင်မယ်ပေါ့။ ရာသက်ပန် တကယ်ဂရုစိုက်မဲ့ မိသားစုဆရာဝန် ဖြစ်သွားရော ၊ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲ။ ဆရာဝန်သာဖြစ်လာပြီး ဘာမှမတတ်ရင်တောင် နာမည်ရှေ့ ဒေါက်တာ တပ်ရတာ နဲသလား။ နိုင်ငံခြားက လူတွေကလည်း မြန်မာပြည်က ဆရာဝန်မဆိုရင် ပညာတတ်၊ ဂုဏ်သရေရှိ၊ ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးသားမို့ ကျောင်းအစကတက်ဖို့မလို၊ မြန်မာမိန်းကလေးလဲဖြစ် မို့ instant noodle ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေး အဆင်သင့်ရလိုက်သလို လိုချင်ကြတယ်။ မိတ်ဆွေပေါတဲ့ ကျမအဒေါ်က သူ့သမီးကို လောလောဆော်ဆော် မပေးစားချင်သော်ငြား နီးစပ်ရာအသိတွေကတဆင့် လာစပ်တဲ့ သူတွေက အများသား။ အခုတလော ကြားတာများလာတာက “ကောင်လေးက အမေရိကားမှာ အင်ဂျင်နီယာတဲ့” ။ ရန်ကုန်က စပ်တဲ့လူတွေကို ကိုယ်တိုင်အကဲခတ် နိုင်ပေမဲ့ အမေရိကားက ကောင်လေးဆိုတော့ အဒေါ်က အမေရိကားမှာနေတဲ့ ကျမတို့ ညီအမတွေကို တီးခေါက်လာတာပေါ့။ ဒီနာမည်ကို သိလားပေ့ါ။ မိဘဆိုတော့ ကိုယ့်သမီးဆရာဝန်အတွက် ခပ်မြင့်မြင့်လေးရစေချင်မှာပေ့ါ။ ရန်ကုန်က ဆရာဝန်ဒီဂရီစာရွက်ကိုင်ထက် အမေရိကားက အင်ဂျင်နီယာဆို ပိုတော်မလား။
စင်္ကာပူမှာရော ၊အမေရိကားမှာရော၊အင်္ဂလန်မှာရော အင်ဂျင်နီယာတွေပေါမှပေါ။ နိုင်ငံခြားမှာ စာသွားဖတ်တဲ့ လူတိုင်းလိုလိုက အချိန်အကြာကြီးဖတ်ရတဲ့ ဆရာဝန်ထက် အချိန်တိုတိုဖတ်၊ မြန်မြန်ဒီဂရီရ၊ ကျောင်းပြီးပြီးချင်း ဘက်ချလာဒီဂရီလေးနဲ့တင် ပိုက်ပိုက်များများရတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတို့ ကွန်ပြူတာမေဂျာတို့ကို ရွေးကြတာချည်းပဲ။ ယောက်ျာလေးတွေဆို အင်ဂျင်နီယာနဲ့ ကွက်တိပဲဆိုတော့ ပိုတောင် အဆင်ပြေသေး။ ပြောတော့လွယ်တယ်၊ တကယ်လွယ်လားဆိုတော့ ကျောင်းမပြီးပဲ အလုပ်လည်းအတည်တကျမလုပ်နိုင်၊ ကျောင်းလည်းဆက်မတက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေ အမေရိကားမှာ အများကြီး။ ကျောင်းလခဈေးကြီးလို့ အလုပ်ခဏထွက်လုပ်ပြီး ကျောင်းလခစုတာက စပြီး ကျောင်းတက်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျောင်းမပြီးနိုင်တဲ့သူတွေအများကြီး။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့ ကိုယ်တိုင်ကျောင်းလခရှာရတဲ့ ဘ၀တွေကိုလေးစားပါတယ်။ တချို့ကျတော့ မိဘကကျောင်းထားပေးပါလျက် စာမဖတ်ချင်လို့ ၊ မဖတ်နိုင်လို့ ကျောင်းတ၀က်တပျက်နဲ့ ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာ ၊ စူရှီဆိုင်မှာ၊ ကားပြင်ဆိုင်မှာတို့၊တက်စီမောင်းတာတို့ နှစ်နဲ့ချီလုပ်နေတာတွေ အများကြီး။ အလုပ်ဟူသမျှဂုဏ်ရှိစွမို့ ဒီအလုပ်တွေကို ကဲ့ရဲ့တာမဟုတ်ပါ။ ဒီထက်ပိုကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်ပါလျက်နဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိူးကြောင့် တ၀က်တပျက် မှာရပ်နေရတာကို နှမြောမိတာ။ ဆိုတော့ “အမေရိကားက အင်ဂျင်နီယာ” ဆိုရင် ဘယ်လို အင်ဂျင်နီယာလဲ။ တက်စီနေ့တိုင်းမောင်းနေရတဲ့ အင်ဂျင်နီယာလား၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာ Cashier လုပ်နေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာလား၊ Facebook မှာလုပ်နေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာလား၊ Facebook မှာ ပီပီပြင်ပြင်မလုပ်နိုင်လို့ အလုပ်ဖြုတ်ခံထားရတဲ့ အင်ဂျင်နီယာလား၊ အင်ဂျင်နီယာနဲ့အောင်ပြီးမှ လက်ကြောမတင်းလို့ ဟိုပြောင်းချင်သလိုလို၊ ဒီပြောင်းချင်သလိုလို၊ မြန်မာပြည်ပြန်ချင်သလိုလို အင်ဂျင်နီယာလား၊ student visa နဲ့လာပြီးမှ ကျောင်းဆက်မတက်တော့လို့ immigration status ဟိုမရောက် ဒီမရောက် အင်ဂျင်နီယာလား။ ဘယ်သူက မကောင်းဘူး၊ ဘယ်သူက ကောင်းတယ် မပြောပါ။ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်ကိုက်ရင်ပြီးတာပါဘဲ။ ကိုယ်ရှာပေးလိုက်တဲ့လူက ကိုယ်ထင်တဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ သေချာ စီစစ်ကြစေချင်တာပါ။ အမေရိကားမှာ ဓာတ်ဆီတွေဆိုင်ပိုင်တဲ့ မြန်မာသဌေးတွေ အများကြီးရှိသလို ကောင်တာမှာပိုက်ဆံရှင်းတဲ့ မြန်မာတွေလည်း အများကြီးပါ။
အင်္ဂလန်မှာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရဲ့ တရားမဖောက်ဖျက်ရုံလေး ကျောင်းအပြတက်ပြီး ၁၀နှစ်လောက် အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီလိုအပြတက်ဖို့ ကျောင်းလခနည်းနည်းလေးနဲ့ကျောင်းတွေလည်းအများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုတက်နေတဲ့လူတွေက အလုပ်လာလုပ်တာကနေ တရားဝင်နေလို့ရအောင် ကျောင်းသားဗီဇာ အပြယူထားတာပါ။ ၁၀နှစ်ပြည့်ရင် PR လိုနေခွင့်ရမယ်ဆိုလား၊ ဒါကြောင့် ရသမျှအလုပ်လုပ်၊ တရားဘောင်အတွင်းမှာကျောင်းအပြစာရင်းသွင်းထား၊ ကျောင်းဆက်တက်လို့ရအောင် စာမေးပွဲ မကျကျအောင် ဖြေပြီး၊ ၁၀နှစ်ပြည့်အောင် စောင့်နေကြတာအများကြီး။ “ကျမ အသိရဲ့ သားက လန်ဒန်မှာကျောင်းတက်နေတာ” ဆိုပြီးလာစပ်လို့ကတော့ အချက်ပြမီးနီတွေ မီးဝါတွေ တောက်နေသင့်ပြီ။ Ph.D တက်နေသလိုလို ၊ post-doc research လုပ်နေသလိုလို။ မြန်မာပြည်ကလူတွေကတော့ ပြည်ပမှာ ကျောင်းတက် အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင် အထင်တကြီး အတွေးတွေကို အရင်စတွေးလေ့ရှိကြတယ်။
ဒါဖြင့် ပြည်ပမှာ ကောင်းကောင်းကန်းကန်း ယောက်ျားလေးတွေမရှိဘူးလား လို့မေးစရာ…။ ရှိတာပေါ့၊ အများကြီး။ ဒါပေမဲ့ ကောင်းတဲ့သူတွေက သူများတွေယူလို့ကုန်လောက်ပြီ။ မြန်မာပြည်မှာပြန်စပ်ရတဲ့ အထိမရောက်တော့ဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာ မြန်မာမိန်းကလေးတွေလည်းရှိတာမမေ့နဲ့လေ။ ပိုတော်ပိုကောင်းတဲ့ ကောင်းလေးတွေကလည်း ပိုတော်ပိုထက်တဲ့ ကောင်းမလေးတွေနဲ့ ပါသွားပြီးသား။ နိုင်ငံခြားက မြန်မာမိန်းကလေးတွေထဲမှာ မတွေ့သူတွေကလည်း နိုင်ငံခြားသားထဲမှာ ရှာယူပြီးသွားပြီ။ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်စပ်ရတဲ့ သူဆိုတာ ဒီမှာ ရွေးကျန်ဖြစ်သွားလို့ပဲ။ ဈေးသည်တွေလိုပဲ ဒီဈေးမှာရောင်းမကုန်ရင် ဈေးကွက်အသစ်ရှာပြီး နောက်ဈေးပြောင်းရောင်းရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာပြန်စပ်တဲ့ လူတော်လူကောင်းတွေလည်းရှိတာပေါ့။ အလုပ်မကောင်း အခြေအနေမကောင်းပေမဲ့ စိတ်ကောင်းလူကောင်းတွေလည်း အများကြီး။ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်ကိုက်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ။
ပြည်တွင်းကလူအချင်းချင်း လူကဲခတ်ရတာ ခက်မှတော့ ပြည်ပကလူတွေကို အကဲဖြတ်ရတာ ပိုခက်မှာပါ။ ချိတ်စပ်ပေးတဲ့ လူတွေကို ညာနေတယ်လို့ မဆိုလိုပါ။ မြန်မာပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပက ဓလေ့ထုံးစံတွေ မတူတော့ ဘယ်လို လွတ်ကွက်တွေရှိသလဲဆိုတာ သိဖို့ခက်ပါတယ်။ စပ်ပေးတဲ့ လူတွေကြားထဲမှာကိုပဲ စကားကျန်တာတွေ၊ စကားဖောင်းပွတာတွေနဲ့ အမှန်ပျောက်သွားတတ်တယ်။ သားကို နိုင်ငံခြားပို့ထားပြီး ဟိုမှာ တကယ်ဘာလုပ်နေလဲ သေသေချာချာ မသိ နားမလည်တဲ့ မိဘတွေလည်း အများကြီးဆိုတော့ သူတို့အပြစ်လည်း မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံခြားမှာ အသိရှိတဲ့ သူတွေကတော့ စုံစမ်းပေးနိုင်ပေမဲ့ အဆက်အသွယ်မရှိသူတွေကျတော့ နိုင်ငံခြားနေ ဆိုတာလေးနဲ့တင် ကောင်းတယ်ထင်ပြီး သူတို့သမီးလေးကို ပေးစားလိုက်ပြီးမှ ကိုယ်ထင်သလိုမဟုတ်မှာ စိုးရိမ်မိတယ်။
ဒီတော့ ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်က တော်တော်ထက်ထက် အလားအလာရှိတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေထဲကရွေးမလား (ဒီရွာထဲမှာတင်အများကြီး) ၊ နိုင်ငံခြားက ရွေးကျန်ထဲက ရွေးမလား။ နိုင်ငံခြားကဆိုလို့ အထင်မကြီးပါနဲ့။ ပြည်တွင်းကလူတွေထက် သာတယ်လို့ မယူဆပါနဲ့။ အရည်အသွေးကောင်းကျောက်တွေက ပြည်တွင်းမှာနေနေ ပြည်ပမှာနေနေ တောက်ပြောင်မှာပါ။
p.s: ကျမအဒေါ်လိုပဲ သားသမီးတွေအတွက် အိမ်ထောင်ဖက်ရှာပေးနေရတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ မိဘဆွေမျိုးတွေ သတိချပ်မိအောင် ရေးလိုက်တာပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မိဘတွေ ဆွေမျိုးတွေ ရှာပေးစားကြတယ်ဆိုတာ ၊ အရမ်းချမ်းသာတဲ့ လူနည်းစု အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာနဲ့စစ်ဗိုလ်တွေကြားမှာပဲ ရှိပါတော့တယ်ဗျား
အမေဂျီးကားက အင်ဂျင်နီယာယောက်ျားလေးဆိုရင် ဦးကျောက်တို့ခေတ်ထဲက ရန်ကုန်တရုတ်တန်းမှာ ဈေးကွက်တောင်ရှိသကွယ့်။ အဆင်ပြေသွားကြသူများလဲရှိသလို၊ ပေါင်းကြည့်မှ သုံးစားမရလို့ ကွဲကြ ကွာကြတာတွေလဲ တစ်ပုံတပင်ပါ။
ဘယ်အရပ်မှာနေနေ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိ၊ ကိုယ်ချင်းလဲချစ်၊ မိဘကလဲ သဘောတူဆိုရင်ဖြင့် အကောင်းဆုံးပေါ့ကွယ်။
ဦးကျောက်က ရွေးကျန်ကြီးဆိုတော့ ဈေးကွက်မပြောင်းလိုက်ဘူးလား။ ယူအေအီးကလူတွေဆို supply သိပ်မရှိသေးတော့ ဈေးကောင်းလောက်တယ်။
သကြားလုံးကြော်လို့ခေါ်မလား၊ မချိုမချဉ်ကြော်လို့ခေါ်မလား ကြေးမလောင် ညလေးရေ
ယူအေအီးက လူတွေဈေးကောင်းတယ်ဆိုလို့ ရင်ခုန်သွားတာပဲ… ဒို့ကတော့ ဈေးပေါပါတယ်ကွယ်… ကြိုက်သလောက်ယူ၊ ကျသလောက်ရှင်းပါ..
အနော့်ကျတော့ စပ်ဖို့နေနေသာသာ ဖြစ်နိုင်ရင် မယူပါနဲ့လား သမီးရယ်တဲ့…
ခုချိန်အထိတော့ ဟုတ်ကဲ့ လို့ပဲ… ဟဲ..နောက်ကျရင်တော့ မသိဝူးနော်…
နောက်ခါ အဲ့လိုပေါရင်လေ …
သာမီးမှာ ဂျစ်တူ ချိဒယ်လို့ ပေါလိုက် ..
ယူမှာဘဲလို့ ပေါလိုက် …
ဟောဒီက .. ဘုန်း .. ဘုန်း .. (ရင်ဘတ် ရိုက်ပြသံ)
ကျုပ် တီယောက်လုံး ချိဘာဒယ် ….
အကယ်၍များ ကျုပ် မိန်းမ ယူလို့ ……
သမီးလေး မွေးလို့ ……
ဆရာဝန်လေး ဖြစ်လို့ …….
လာစပ်တဲ့လူက ပြည်ပ က ဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြင့် ………..
ဂလိုမျိုး ဆင်ခြင်နိုင်ဒါပေါ့လို့ ……… နော့ …. အဟီးးးး
နောင်လာမယ့်သမီးထက် အခုလောလောဆယ် ….
အံစာတုံးက နိုင်ငံခြားသွားနေဖြစ်လို့ ….
ဆရာဝန်ချွေးမလေးရှာပေးဖို့ မြန်မာပြည်က အမေကိုပူဆာလို့ ….
လာစပ်ခံရတဲ့ ကောင်မလေး က ဂလိူမျိုးတွေ သိထားခဲ့ရင် ဖြင့်….
အံစာတုံးကို ဝေါင်ဝေါင်ရှေး ဝေးဝေးရှောင် နိုင်ဒါပေါ့လို့ … နော့ … အဟီးးး
စိတ်ရှိလက်ရှိ..ဖေါ်ကောင်လုပ်… ရေးထည့်လိုက်လို့ကတော့.. ယူအက်စ်က.. မြန်မာတွေေ-ာက်ရှက်တွေကွဲကုန်ဦးမယ်..
ချကားဂို ချင်ချင်ဂျင်ဂျင် ပေါဘာ …
ဟိုမှာ အထက်မှာ ရေးထားတာ မဖတ်ဘူးလား ….
“အဒေါ်က အမေရိကားမှာနေတဲ့ ကျမတို့ ညီအမတွေကို”
ကိုယ်နဲ့အကြောင်းသိ ပဏာရလို့ယူတာပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ် ခေတ်တွေလည်းပြောင်းခဲ့ပါဘီ
ကျုပ်လို ရိုသားကြိုးစားစုစောင်းတတ်တဲ့ သူလည်းရှိခြင်ရှိပေမပေါ့
တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ သူဖါသာနေခြင်တဲ့နေရာနေ လုပ်ခြင်တာလုပ်ပေါ့
ပြည်ပမှနေလိုက်တာ ဂျဘိုးနဲ့ကြွက်ခြင်ယင် က အဘခေါ်ရတဲ့ကောင်တွေ
မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး ကောင်မလေးတွေနဲ့အိမ်ထောင်ကျ သူ့အိုးသူ့အိမ်သူ့မိသားစုနဲ့ ဟုတ်နေတာဘဲ
ဒါပေမယ့် အမေရိကမှာ စိတ်ကြိုက်မိန်းမရဘို့ခက်တယ်လို့ပြောကြတာဘဲ
( ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုခြင်တာကတော့ ကျုပ်နှမလေးသာဖြစ်မယ်ဆိုရင် မသိမတွေ့ဘူးတဲ့
တစ်ဖက်မိသားစုတွေရဲ့ အခြေနေတွေကို သေခြာလေ့လာဘို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ် ( ထင်တာ )
သိပ်လည်းမရွေးနဲ့ပေါ့ဟယ် တော်ကြာ ငှက်ပျောပင်ကြီးဖက်နေရဦးမယ်
အစ်မသမီးအရွယ်ရောက်ရင်တော့…သူတကယ်သဘောကျတဲ့လူထဲကပဲ အကျင့်စာရိတ္တ၊ဥစ္စာ၊ပညာ အတန်အသင့်ရှိတဲ့လူမျိုးကိုပဲ ရွေးချယ်မယ်လို့စိတ်ကူးတယ်။
အခုလို လာစပ်တဲ့လူတွေများနေတဲ့ ညီမအဒေါ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့
မတင်မကျလည်းပြောထားသင့်တာပေါ့ ကျွန်မသမီးသဘောကျမကျကြည့်ပြီးမှ ကျန်တာကျွန်မတို့ဆက်စဉ်းစားမယ်ပေါ့။
ဟုတ်ပ့ါ။ မြင်လိုရာမြင်စေ၊ ကောက်လိုရာကောက်စေ။
အရီး ရဲ့ ဆရာ ပြောဖူးတာလေး။
မိဘ ကတော့ ရှာမပေးဘူး။
မိဘ နဲ့ ပေါင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေါင်းရမှာတဲ့။
သူ့ သမီး (ဆရာဝန်) က ကြိုက်ရင် ဆိုက်ကားသမားဘဲ ယူယူ။ သဘောတူမတဲ့။
သူ့သမီးရဲ့ ဘယ်လို သူဟာ သူနဲ့ သင့်တော်တယ်၊ အသိုင်းအဝိုင်း နဲ့ သင့်တော်တယ် ဆိုတဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင် နိုင်စွမ်း ကို ယုံလို့ပါတဲ့။
တကယ်လို့ သူ့သမီးက ဆိုက်ကားသမားကို ယူရင် အဲဒီ ဆိုက်ကားသမားလေး က အနည်းနည်းတော့ တော်ချက် ရှိမှာ အသေအချာဘဲတဲ့။
အဲဒီ ညီမချောချောလေး က …
လဲ့လဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ရှိခဲ့တုံးကတော့ အဲဒီလိုစပ်ကြဟပ်ကြတဲ့ လူပွဲစားတွေကိုအင်မတန်မုန်းခဲ့တာ။
ထိုင်ဝမ်သားတို့ ဟောင်ကောင်သားတို့ လူတောင်မမြင်ဖူးပဲနဲ့ လက်ခံတဲ့သူတွေလည်းရှိပါ့။
နောက် ဆယ်နှစ်လောက်မှာ အမေရိကားခေတ်စားလာတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်။အမေရိကားမှာလာနေပါကွာတဲ့။ Combo ရအောင်လုပ်ပေးကြမယ်တဲ့။
Combo ဆိုတာ USMLE ခေါ်တဲ့ အမေရိကားက ဆရာဝန်စာမေးပွဲလည်းအောင်၊DV ခေါ်တဲ့ US ၀င်ခွင့်ထီလည်းပေါက်၊ US ကလူနဲ့ အိမ်ထောင်လည်းကျ ပါတဲ့။
စာမေးပွဲ ခက်ခက်ခဲခဲလည်းဖြေပြီး၊DV လည်းရမှတော့ ကိုယ့် အစွမ်းနဲ့ကိုယ်ပဲနေမှာပေါ့။
ကိုယ့်အစွမ်းအစနဲ့ ကိုယ်ကျတော့လည်း ဘေးနားကလူတွေ ကိုယ့်လောက် တစ်ယောက်မှတော်တယ်မထင်ဘူး။
အဲသလိုနဲ့ အပျိုကြီး အဖွား၊အပျိုကြီးအဒေါ်၊အပျိုကြီးအမ၊အပျိုကြီးညီမ၊အပျိုကြီးတူမ (အကိုဝမ်းကွဲကမွေးတဲ့ တူမတွေဆို ၃၀ကျော်ပြီ)တွေနဲ့ မျိုးရိုးစဉ်လာထိန်သိမ်းပြီး သူ့ကျွန်မခံပြီပဲ။
ခုထိလည်း အပျိုကြီးဖြစ်တာကို ဂုဏ်ယူလျက်ပဲ။
အဲတော့ လဲ့လဲ့ကို နှလုံးသားမပါပဲတော့ ခေါင်းမငြိမ့်ပါနဲ့လို။(သဂျီး မဖတ်မိပါစေနဲ့)
အဲသလို ပွဲစားနဲ့ အလဲအထပ်အလုပ်ကောင်းလို့ ကျုပ်ဆွေမျိုးတွေထဲမှာရော ကျုပ်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာရော အဆင်မပြေ အစပ်မတည့် ကွဲပြဲကုန်တာ- မကွဲနိုင်လို့ ဒုက္ခခါးစည်းခံနေတာတွေ အများကြီး….
တကယ်တော့ လင်မယားမဖြစ်ခင် သူငယ်ချင်းအရင်ဖြစ်နှင့်သင့်တယ်…
ဆိုလိုတာက တယောက်အကြောင်းတယောက် ထဲထဲဝင်ဝင် သိထားကြသင့်တယ်….
အဲသလို သိထားပြီးပြီထင်လို့ ယူကြရင်တောင် အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ အင်ထုထားတာတွေတဖြေးဖြေးပေါ်လာလို့ ညှိယူကြရတာ နားလည်မှု့ပေးကြရတာတွေ အများကြီးကျန်သေးတယ်…….
အဲဒါ ငွေရှိတာမက်ပြီးလိုက်စပ်လို့တော့ ကိုယ့်သမီး ငွေဝယ်ကျွန်ဖြစ်မယ်….
ဂုဏ်ရှိတာမက်ပြီးလိုက်စပ်လို့တော့ ကိုယ့်သမီး ဂုဏ်ဝယ်ကျွန်ဖြစ်မယ်….
အိမ်ထောင်ရဲ့ ဘ၀ရဲ့ အရှင်သခင်တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ် ဆိုတာကို
ဦးဦးပါ၊ “အိမ်ထောင်ရဲ့ ဘ၀ရဲ့ အရှင်သခင်” ဖြစ်မှာ သေချာလို့လား။ အချစ်ရှိတာမက်ရင် အချစ်ဝယ်ကျွန်ဖြစ်နေဦးမယ်။ အန်တီပဒုံမာပြောသလို “သူ့ကျွန်မခံပြီပဲ” ဖြစ်ဖို့ဆို အပျိုကြီးလုပ်ကြပါ။
အခုခေတာ် အတော်များများတော့ ကိုယ့်ဖာသာရှာဖို့ တိုက်တောင် မတွန်းရလောက်အောင်ဘဲ သွက်လက်နေကြပြီထင့်ပ။
မိဘပေးစားလို့ယူတာ တရုတ်ထဲမှာ ပိုများတယ်ထင်တယ်၊ သူတို့ ငယ်စဉ်မှာသာ အခြားတဦးဦးနဲ့ ရည်းစားဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် အိမ်ထောင်ပြုရင်တော့ လူဂျီးပေးစားတာ ယူတာပဲ။ အိမ်ထောင်ရေး ခိုင်မြဲတာလည်း များတယ်။ အခြားမကြည့်နဲ့ ကြေးမုံဂျီးဆိုရင် ဦးကြောင်ကို တချိန်က ခြစ်လှပါချည်ရဲ့နဲ့ ယောက်ျားလည်းယူရော တရုတ်ပြည်က ကြောင်သားကင် စားသောက်ပိုင်ရှင်နောက် ပါသွားတယ်။ ဩော် ကြေးမုံဂျီး ကြေးမုံဂျီး ခြစ်သူဘဝတုံးကလည်း ဦးကြောင် အသွေးအသားကိုယူတယ်၊ အခုကြတော့လည်း အသက်ပါ လိုချင်နေပြန်ပြီရော..
မိန်းမဆိုဒါ ဆောင်းလေပမာညီ တောင်းလေစွာပလီ ဗောင်းရွှေခွာသည်…..
ဒါတော့ ဟုတ်သလိုပဲ။ မိဘရှာပေးစားတာနည်းလာပြီ ဆိုတာတောင် ဟိုတလောကတင် သူငယ်ချင်းတရုတ်မလေးကို အိမ်ကခွဲပြီး သူတို့သဘောတူတဲ့တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ပေးစားလိုက်တယ်တဲ့။ ဒါတောင်သူ့ရည်းစားက ဆေးကျောင်းအတူတူတက်လာကြတဲ့ ဆရာဝန်တွေ။ နှစ်ယောက်သား ငိုချင်းချရတာ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာပြောမဆုံးဘူး။ တရုတ်မဟုတ်လို့ဆိုလား၊ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်မဟုတ်လို့ဆိုလားပဲ။ ခေတ်ဘယ်လောက်ပြောင်းလာလာ သဘောမတူတဲ့သူတွေက မတူဘူးပဲ။
အိမ်ထောင်သားမွေးကိစ္စက အတော်ခက်ပါတယ် ။ရှေးစကားလဲဒီလိုပြောထားလေရဲ့…
ကြီးစရွေ့ရွေ့၊ အ ဓလေ့ဖြင့်
သင်ချာကြီးကို တော်ပါပီဗျာ. ဝါဆိုမျှစ်စို့ ကလေးကိုပဲ ယူပါတော့မယ်. ကွီ
၀ုတ်ဒယ်.. နိုင်ငံဂျားဆိုတိုင်း အထင်မကြီးဂျာဘာနဲ့.. သင်္ဘောသားတိုင်းလည်း..
ငွေပေါတဲ့ လူပွေဒွေမမှတ်ဂျပါနဲ့..။ အူးစည်လို.. ယူနီဖောင်းဂျီးဝတ်ပြီး ရေဒီယို
တစ်လုံးနဲ့ ဘိုလိုအော်ပြီး ထမင်းငတ်၊အကြွေးတက်နေတဲ့ ပွတ်လေ ပွတ် အရောင်တက်တဲ့
ရှေ့ အလားအလာမှာ.. အတူတကွ.. တောထွက်ပြီး ပါလမီဖြည့်ချင်ရင်တော့…
လုံးလုံးဆိုလို့ ဘယ်သူ့ ကွန်မန့်ကိုများ ရီပလိုင်းလုပ်သလဲလို့၊ ကိုယ့်နာမည်ဖြစ်နေတာကိုး။ ဟီဟီ…
အိမ်ထောင်ရေးကံဆိုတာကို ယုံတယ် အန်ကယ်ကြီးရေ။ ဘယ်လောက်စီစဉ် စဉ်းစားပါစေ အခြေအနေကောင်းတဲ့ မိသားစုကောင်းကောင်းလက်ထဲရောက်သွားပြီး လင်ကောင်းသားကောင်းတွေရတာလျက်၊ ကိုယ်ကလည်းချစ်ပါလျက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မပျော်နိုင်လောက်အောင်ဆိုးတဲ့ အိမ်ထောင်တွေကတော့ ကံကိုပဲပုံချရမှာပဲ။ လူအကြောင်းပေါင်းကြည့်မှ သိတာ မှလား။ ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ပြုတာ နှစ်ယောက်သားပေါင်းရုံမက မိသားစုလိုက်ပေါင်းရတယ်ဆိုတော့ လူကုန်လူခန်း ကြိုကြည့်လို့က အကုန်မှမမြင်နိုင်ပဲ။
သကြားလုံးကြော် တို့ US ဘက်တော့ မသိဘူး ၊
အဘတို့ သြဇီက ဗမာ အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေ ၊
မြန်မာပြည် ပြန်ပြီး ယောက်ျား မိန်းမ ငယ်ငယ်တွေ ရှာယူကြတာ ခေတ်စားနေတယ် ။
သိပ်မကြာခင် တစ်လ နှစ်လ လောက်ကပဲ အဘတို့ ဆစ်ဒနီက ၊
အသက် ၅၀ ကျော် ဗမာ အဖွားကြီးတစ်ယောက် ၊
မြန်မာပြည် ပြန်ပြီး စတုထ္ထမြောက် ယောက်ျား ငယ်ငယ်လေး နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ ပြန်ပြီ ။
အဲဒီ အဖွားကြီးမှာ ပိုက်ဆံလဲ သိပ်ရှိလှတာ မဟုတ် ၊
အဲဒီ ယောက်ျား ငယ်က ၂ နှစ်လောက်ပေါင်းပြီး ၊
PR ရရင် ခြေစုံကန်ထွက်သွားရင် အဖွားကြီး ရင်ကွဲကျန်ခဲ့အုံးမယ် ။
သကြားလုံးကြော် တို့ဖက်မှာကော ဘယ်လိုနေလဲ ။
ဗမာတွေထဲမှာ ကျမတော့ ဒါမျိုးမတွေ့မိသေးဘူး။ တရုတ်တွေထဲမှာတော့ ခဏခဏတွေ့တယ်။ ငယ်တုန်း အလုပ်ကုန်းရုန်းလုပ်ပြီး အသက် ၄၀-၄၅ ကျော်မှ လူပျိုကြီးဘ၀ မနေချင်တော့လို့ တရုတ်ပြည်က မိန်းမငယ်ငယ် ၂၀ကျော်လေးတွေ သွားယူတာလေ။ ယောင်္ကျားလေး အချိုးနဲ့ယှဉ်ရင် မိန်းကလေးဦးရေ မမျှတအောင် နည်းလွန်းတဲ့ တရုတ်ပြည်မှာဆို ပြည်တွင်းမှာတင် ရွေးစရာကောင်းကောင်းတွေ အများကြီးရှိလောက်ပါရဲ့နဲ့ ပြည်ပက အသက်ကြီးကြီးကို ယူတယ်ဆိုတော့ ပြည်ပကလူတွေ မမက်ပါနဲ့လို့ ပြောရမှာ ခပ်ခက်ခက်ပဲ …..
သများတို့ မားကတ်ကို ဒုတ်နဲ့ မထိုးပါနဲ့ ကွယ်…
ပြည်တွင်းက ညီမလေးဒို့ရေ …
ဟောသည့် က မချိုမချဉ်ကြော်ကြီး ရေးတဲ့ စကားတွေမှာ
နားယောင်ကုန်မှာ စိုးတယ်.. စိုးမိတယ် ..စိုးရိမ်မိတော့တယ်…
တစ်ခါမှ မယူဘူးတဲ့သူတွေ ငွေကြေးပြည့်စုံအောင် ၊
အရင် စုဆောင်းပြီးမှ ယူတာကို အပြစ် မပြောပါဘူးကွယ် ။
အဘ က အားတောင်ပေးသေးတယ် ၊ ဒါ တရုတ် ထုံးစံပဲလေ ။
အဘ လည်း ၊ နဲနဲ စုဆောင်းမိမှ ၊ ကပ္ပတိန် ဖြစ်ပြီးမှ ၊ ၃၈ လောက်မှ ယူတာပါပဲ ။
အခုဟာက အိမ်ထောင် ခဏ ခဏ ပြု ၊
ကိုယ့်ရဲ့ သြဇီ နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုကို အားသာမှု အနေနှင့် ဆွဲဆောင်ပြီး ၊
မြန်မာနိုင်ငံက အငယ်လေးတွေ ပြန်ယူကြတာ ထုံးစံလို ဖြစ်နေတာကို ပြောတာပါ ။
အငယ်လေးတွေ ပြန်ယူကြတဲ့သူတွေကို အပြစ် မပြောပါဘူး ။
သူ့ စိတ်ချမ်းသာမှု နှင့် သူ ။ သူ့ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့်ပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဒီဖက်မှာတော့ အဖိုးကြီး / အဖွားကြီး တွေ ခုနှစ်ပိုင်း ၊
တော်တော် လုပ်လာကြတာကို တွေ့ရလို့ ၊ Popular Culture လို ဖြစ်နေလို့ ၊
ဟိုဖက်မှာကော ဘယ်လိုလဲလို့ လှမ်းမေးတာပါ ။
ဟဲ ဟဲ ၊ အဘ လည်း အဖိုးကြီး ဖြစ်လာပြီလေ ။
သူကြီးတို့ US မှာနေတဲ့သူတွေ ကံကောင်းချက်ကတော့ ။
US မှာ Chivas Regal 750 ml ကိုမှ US$ 23 = A$ 22 ပဲကျတယ် ။
သြဇီမှာ Chivas Regal 700 ml ကို A$ 44 ကျတယ် ။
ကုန်ဈေးနှုန်းက နှစ်ဆ တိတိ ကွာနေတယ် ။
အဘဖောအတွက် ကံမဆိုးပါဘူး။ အရက်မသောက်တဲ့ အဘဖော က စကော့ရှ် ဈေးကိုယှဉ်ရတယ်လို့။ သံလွင်ဆီဈေးလေး ယှဉ်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ သြဇီမှာများပိုပေါသလားမသိဘူး။
သြဇီက စာရေးဆရာ တစ်ယောက် ပြီးခဲ့တဲ့လက ၊
US သွားလည်တယ်လေ ။ သူ ပြောပြတာ ။
သူဆို US က မပြန်မချင်း တန်တယ် ၊ တန်တယ် ဆိုပြီး အမုန်းဆွဲခဲ့တာလေ ။
ရွေးကျန်ဖြစ်ဖို့က 99% လောက်သေချာတယ်လေ…..။
Made in D-tin..
တားတားက ညမာပြည်ဖြစ် အစစ်.. ခစ် ခစ်
နောက်မှာ နောက်မှာ …
မြန်မာပြည်က တော်တော်ထက်ထက် အလားအလာရှိတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေထဲကရွေးမလား (ဒီရွာထဲမှာတင်အများကြီး) ၊ နိုင်ငံခြားက ရွေးကျန်ထဲက ရွေးမလား။ဆိုရင်တော့
အို …………….. နိုင်ငံခြားက ရွှေးကျန်ထဲက ဘာလို့ရွှေးရမှာလား
ဒီလောက်ဆို ရွာထဲက ကိုလူပျိုတွေဆီက ကြေငြာဝင်ပေးခ ကောက်သင့်ပြီထင်တယ်။
ဦးမာဃလဲ မြန်မာပြည်သားပါ လို့
မြန်မာတွေမှာ. အိမ်ထောင်ဖက်ကို.. ရှာစပ်ပေးတဲ့ …ပွဲစားရှိပါတယ်..
မိဘတွေက. လိုချင်တဲ့.. အချက်အလက်ကို.. .ပွဲစားမှာထားလိုက်ယုံပါပဲ…
ယူအက်စ်က.. တချို့စစ်ဒဇင်တွေ.. မြန်မာပြည်ကိုယ်တိုင်ဆင်းရှာတာလည်း..ရှိပါတယ်..
နောက်ပိုင်း.. မြန်မာပြည်သွားရဖို့..ဗီဇာလွယ်လာတော့.. ကိုယ်တိုင်ဆင်းနေသူတွေများလာတယ်.. ထင်မိတယ်..
အပြန်မှာ.. ဖိယောင်းဆေးဗီဇာနဲ့.ခေါ်လာတယ်ရယ်… လက်ထပ်ပြီးမှသံရုံးဝင်..ဗီဇာယူလာတာမျိုး.. ၂မျိုးတွေ့ရတယ်..
ကောင်းတာက..ဖိယောင်းဆေးဗီဇာနဲ့သံရုံးလက်ဆွဲဝင်.. အတူလေယဉ်တက်စီးလာ.. ယူအက်စ်ရောက်မှ.. လက်ထပ်တာပါ..
လက်ထပ်ပြီးမှ.. မြန်မာပြည်မှာအင်တာဗျူးဝင်..ပြီးမှဗီဇာလျှောက်ဝင်လာရင်..တခါတလေ..ဘာမှန်းမသိ… ကြန့်ကြာနေတာရှိတတ်သလို.. သံရုံးဝင်တာမှာလည်း.. စာရွက်စာတမ်း…အခွန်..စတာတွေတော်တော်တင်ယူရပြီး…အချိန်ပိုကြာပါကြောင်း…
ဟုတ်တယ် သူကြီး။ ကျမအသိတစ်ယောက် ယူအက်စ်ကတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတာ တစ်နှစ်ခွဲလောက်တောင်ရှိပြီ ခုထိသူ့အိမ်ထောင်ဖက်နောက် မလိုက်နိုင်သေးဘူး။ အရင်အိမ်ထောင်နဲ့ပါလာတဲ့ကလေးကိုပါ ခေါ်ဖို့ဆိုရင် ပိုခက်မယ်ထင်တယ်နော်။
လူမှုရေး.. ဘာညာတွေနဲ့. မို့.. .တော်တော့ကို..ရုံးကန်ရလိမ့်မယ်..။ :harr:
တားတားဂဒေါ့ ချားခြင်ရင် ဝယ်ခြားပစ်ရိုက်တာဗဲ…..ရှလွတ်